Ukhiye ekuthuthukiseni inkampani yesimanje iyisici womuntu. Kuphela nge human resource inhlanganisela eqinile ingakwazi sifune eside nokuthuthukiswa nzile inkampani. Shenyong abantu abanamathela "abantu ngamakhasimende" imodeli ukuphathwa, yezinhlobo ezahlukene ithalenta inkhundla ezibanzi sokuthuthukiswa inkampani has a amandla inzuzo eqinile.
Ibhizinisi ifilosofi: zabuna kweqiniso, kusukela lapho kuqalwa eside kanye nezinhloso!
Isisebenzi orientation - siyasihlonipha futhi ukuqeqesha abasebenzi bethu, bakhuthaze ukuba iqhaza ukuphathwa kwamabhizinisi, ahlinzeke indawo ebanzi nentuthuko yabo, ukukhuthaza ukuthuthukiswa kobuhle futhi ugweme izihlobo zabo, futhi ukhuthaze abantu kuwo wonke amazinga ukuze kube uFrank evulekile.
Nenhlonipho-ikhasimende ikhasimende lihlale liqinisile, thina sonke ukuze kweneliseke izivakashi, futhi sicela abaphathi komnyango ngqo ukubhekana zokuxhumana ikhasimende, ukuqonda izidingo ikhasimende, ukuhlinzeka kangcono inkonzo value kwamakhasimende. Thina kwenza umoya onamandla kwamasiko, ake izivakashi uzizwe sengathi ukufudumala ekhaya.
Inhloso: ukunikeza inkonzo yesikhathi kubasebenzisi ukwethembeka nokuhlakanipha.
Amanani: Usizo lwabenza imisenenzi ngenxa yokuphikelela.